Teny fanolorana sy Tenivavolombelona
Fanoroana ireo lohahevitra
Hijery ireo zavatra voasintona
Ireo zavatra voasintona
Ny boky manontolo (PDF)
Fisehon’ny fanovozan-kevitra eny ambanin’ny pejy
Safidy momba ny bande passante
Pejin-dohatenin’ny Bokin’i Môrmôna
Araka izany, ity dia famintinana ny rakitsoratry ny olon’i Nefia, ary koa ny an’ny Lamanita—Nosoratana ho an’ny Lamanita izay sisa tavela tamin’ny mpianakavin’i Isiraely; ary koa ho an’ny Jiosy sy ny Jentilisa—Nosoratana araka ny didy ary koa araka ny fanahin’ny faminaniana sy ny fanambarana—Nosoratana sy nofehezina ary nafenina ho an’ny Tompo izany mba tsy ho azo potehina—Mba havoaka noho ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra sy ny heriny amin’ny alalan’ny fandikana—Nofehezin’ny tànan’i Môrônia, ary nafenina ho an’ny Tompo mba havoaka amin’ny fotoana mahamety izany amin’ny alalan’ny Jentilisa—Ny fandikana izany dia tamin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra.
Ny Bokin’i Môrmôna dia bokin’ny soratra masina azo oharina amin’ny Baiboly. Izany dia rakitsoratry ny fifandraisan’ Andriamanitra tamin’ny mponina fahiny tany Amerika ary mitahiry ny fahafenoan’ny filazantsara maharitra mandrakizay.
Tenivavolombelon’ireo vavolombelona telo
Aoka ho fantatry ny firenena, ny foko sy ny samy hafa fiteny ary ny mponina rehetra izay hahatongavan’ity boky ity: fa izahay, noho ny fahasoavan’ Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika, dia nahita ireo takelaka izay mitahiry ity rakitsoratra ity, izay rakitsoratry ny olon’i Nefia ary koa ny Lamanita rahalahiny, ary koa ny olon’i Jareda izay avy tany amin’ny tilikambo araka ny efa voalaza. Ary fantatray koa fa efa nadika araka ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra sy ny heriny ireo, satria ny feony no efa nilaza izany taminy; noho izany dia fantatray amim-pahatokiana fa marina ny asa soratra. Ary ambaranay koa fa efa nahita ny soratra voasokitra teo amin’ireo takelaka; ary efa naseho anay ireo tamin’ny alalan’ny herin’ Andriamanitra, fa tsy araka ny herin’olombelona. Ary amin-kitsimpo tanteraka no ilazanay fa ny anjelin’ Andriamanitra iray dia nidina avy tany an-danitra ka izy no nitondra sy namelatra ireo takelaka teo imasonay, ka dia nobanjininay sy nojerenay ireo mbamin’ny soratra voasokitra taminy; ary dia fantatray fa noho ny fahasoavan’ Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika, dia nahita izahay ka vavolombelona manambara fa marina ireo zavatra ireo. Ary dia fahagagana teo imasonay izany. Na dia teo aza izany, dia nandidy anay ny feon’ny Tompo ho vavolombelona manambara izany; koa ho fankatoavana ny didin’ Andriamanitra, dia vavolombelona manambara ireo zavatra ireo izahay. Ary fantatray fa raha mahatoky ao amin’i Kristy izahay, dia hoesorinay amin’ny fitafianay ny ran’ny olombelona rehetra, ka ho hita tsy misy pentina izahay eo anatrehan’ny toeram-pitsaran’i Kristy ary hiara-honina Aminy mandrakizay any an-danitra. Ary ny voninahitra anie ho an’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, izay Andriamanitra iray. Amena.
Tenivavolombelon’ireo vavolombelona valo
Aoka ho fantatry ny firenena, ny foko sy ny samy hafa fiteny ary ny mponina rehetra izay hahatongavan’ity boky ity fa efa nasehon’i Joseph Smith zanany, mpandika tenin’ity boky ity anay, ny takelaka izay efa voalaza, izay miendrika volamena; ary izay takelaka rehetra efa nadikan’io Smith voalaza io dia nokasihinay tamin’ny tananay; ary nahita koa ireo soratra voasokitra taminy izahay, ka ireo rehetra ireo dia manana ny endriky ny asa soratra tranainy sy ny fahaizana asa kanto. Ary izahay dia vavolombelona manambara izany amin-kitsimpo fa efa nasehon’io Smith voalaza io anay izany, satria efa hitanay sy naingain’ny tananay, ka fantatray marina fa io Smith voalaza etsy aloha io no manana ireo takelaka izay efa noresahanay. Ary omenay izao tontolo izao ny anaranay ho vavolombelona amin’izao tontolo izao ny zavatra izay efa hitanay. Ary tsy mandainga izahay, fa Andriamanitra no vavolombelona manambara izany.
Fanambaran’ny Mpaminany Joseph Smith
Izao no tenin’ny mpaminany Joseph Smith momba ny niavian’ny Bokin’i Môrmôna:
Fanazavana Fohy momba ny Bokin’i Môrmôna
Ny Bokin’i Môrmôna dia rakitsoratra masin’ny mponina tao Amerika fahizay ary voasokitra tamin’ny takelaka metaly. Ny loharano nakana io rakitsoratra io dia ahitana an’ireto manaraka ireto:
1 Nefia 1
Nanomboka ny rakitsoratry ny olony i Nefia—Nahita andry afo tamin’ny fahitana i Lehia ary namaky tao amin’ny bokin’ny faminaniana—Izy dia nidera an’ Andriamanitra, nanambara mialoha ny fiavian’ny Mesia ary naminany ny fandravana an’i Jerosalema—Nenjehin’ny Jiosy izy. Tokony ho 600 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 2
Nitondra ny ankohonany nankany an-tany foana amoron’ny Ranomasina Mena i Lehia—Nandao ny fananany izy ireo—Nanatitra sorona ho an’ny Tompo i Lehia sy nampianatra ny zanany lahy mba hitandrina ny didy—Nimonomonona manohitra an-drainy i Lamàna sy i Lemoela—Nankatò sy nivavaka tamim-pahatokiana kosa i Nefia; niteny taminy ny Tompo, ary nofidiana ho mpanapaka ny rahalahiny izy. Tokony ho 600 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 3
Niverina tany Jerosalema ny zanakalahin’i Lehia mba haka ireo takela-barahina—Nandà ny hanome ny takelaka i Labàna—Namporisika sy nampahery ny rahalahiny i Nefia—Nangalatra ny fananany i Labàna ary nanandrana ny namono azy ireo—Nikapoka an’i Nefia sy i Samy i Lamàna sy i Lemoela ary nolevileven’ny anjely iray. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 4
Ny namonoan’i Nefia an’i Labàna, araka ny didin’ny Tompo, ary ny nahazoany ny takela-barahina avy eo noho ny tetikadiny—Nisafidy ny hiara-dia amin’ny ankohonan’i Lehia any an-tany foana i Zôrama. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 5
Naniny an’i Lehia i Sarià—Niara-paly izy ireo tamin’ny fiverenan’ny zanany lahy—Nanolotra fanatitra izy ireo—Ny firaketan’ny takela-barahina ny asa soratr’i Mosesy sy ny mpaminany—Nampahafantarin’ny takelaka fa avy amin’ny taranak’i Jôsefa i Lehia—Naminany ny momba ny taranany sy ny fitehirizana ny takelaka i Lehia. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 6
Nanoratra momba ny zavatr’ Andriamanitra i Nefia—Ny fikasan’i Nefia dia ny handresy lahatra ny olona hanatona an’ Andriamanitr’i Abrahama ary hovonjena. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 7
Niverina tany Jerosalema ireo zanakalahin’i Lehia ary nanasa an’i Ismaela sy ny ankohonany mba hiara-dia aminy—Nikomy i Lamàna sy ny hafa—Namporisika ny rahalahiny i Nefia mba hanam-pinoana ny Tompo—Nafatotr’izy ireo tamin’ny tady izy ary notetehiny ny hamono azy—Ny herin’ny finoana no nahafaka azy—Nangataka famelana ny rahalahiny—Nanolotra fanatitra sy fanatitra ho dorana i Lehia sy ny mpiaradia aminy. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 8
Nahita ny hazon’aina tamin’ny fahitana i Lehia—Nihinana tamin’ny voany izy ary naniry ny hanaovan’ny ankohonany torak’izany koa—Nahita anja-by, lalana ety sy tery ary zavon’ny haizina izay mandrakotra ny olona izy—Nihinana tamin’ny voany i Sarià sy i Nefia ary i Samy, fa nandà kosa i Lamàna sy i Lemoela. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 9
Nanao rakitsoratra roa karazana i Nefia—Samy antsoina hoe ny takelak’i Nefia ny tsirairay avy aminy—Nirakitra ny tantaram-piainana andavanandro ny takelaka lehibe; namaofivaofy indrindra kosa ny momba ny zava-masina ny takelaka madinika. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 10
Naminany i Lehia fa ny Jiosy dia hoentin’ny Babyloniana ho babo—Nolazainy ny amin’ny hiavian’ny Mesia iray, ny Mpamonjy, ny Mpanavotra eo anivon’ny Jiosy—Nolazain’i Lehia koa ny fiavin’ilay hanao batisa ny Zanakondrin’ Andriamanitra—Nolazain’i Lehia ny amin’ny fahafatesana sy ny fitsanganan’ny Mesia amin’ny maty—Nampitahainy tamin’ny hazo oliva iray ny fielezan’i Isiraely sy ny fanangonana azy indray—Niteny ny momba ny Zanak’ Andriamanitra, ny fanomezana ny Fanahy Masina ary ny ilana ny fahamarinana i Nefia. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 11
Nahita ny Fanahin’ny Tompo i Nefia ary naseho azy amin’ny fahitana ny hazon’aina—Nahita ny renin’ny Zanak’ Andriamanitra izy ary nianatra ny momba ny fiambanian’ Andriamanitra—Nahita ny fanaovana batisa, ny fampianarana ary ny fanomboana ny Zanakondrin’ Andriamanitra izy—Nahita koa ny antso sy ny asa fanompoan’ny Apôstôly Roa ambin’ny folon’ny Zanakondry izy. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 12
Nahita ny tany nampanantenaina tamin’ny fahitana i Nefia; ny fahamarinana, ny heloka sy ny faharavan’ny mponina tao; ny fiavian’ny Zanakondrin’ Andriamanitra teo anivony; ny fomba hitsaran’ny Mpianatra Roa ambin’ny folo sy ny Apôstôly Roa ambin’ny folo an’i Isiraely; ary ny toetra ratsy sy maloton’ireo izay nihemotra tao amin’ny tsy finoana. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 13
Ny nahitan’i Nefia tamin’ny fahitana ny fiangonan’ny devoly niorina teo anivon’ny jentilisa, ny nahitana sy ny nanjanahana an’i Amerika, ny fahaverezan’ny maro tamin’ireo ampahany tsotra sady sarobidy tamin’ny Baiboly, ny toe-javatra vokatry ny apôstazian’ny jentilisa, ny famerenana amin’ny laoniny ny filazantsara, ny fivoahan’ny soratra masin’ny andro farany, ary ny fanorenana an’i Ziona. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 14
Nilaza tamin’i Nefia ny fitahiana sy ny ozona hianjady amin’ny Jentilisa ny anjely iray—Tsy misy afa-tsy fiangonana roa: ny fiangonan’ny Zanakondrin’ Andriamanitra sy ny fiangonan’ny devoly—Nenjehin’ny fiangonana makadiry sy maharikoriko ny Olomasin’ Andriamanitra tany amin’ny firenen-drehetra—Hanoratra ny momba ny fiafaran’izao tontolo izao ny Apôstôly Jaona. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
Handray ny filazantsara avy amin’ny Jentilisa ny taranak’i Lehia amin’ny andro farany—Ampitoviana amin’ny hazo oliva iray izay hanaovana grefy indray ny tena sampany, ny fanangonana an’i Isiraely—Nanazava ny fahitana momba ny hazon’aina i Nefia sy niteny momba ny fahamarinan’ Andriamanitra tamin’ny nanasarahany ny olon-dratsy tamin’ny olo-marina. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 16
Ny mahasarotra ny fandraisan’ny olon-dratsy ny fahamarinana—Nanambady ny zanakavavin’i Ismaela ny zanakalahin’i Lehia—Nitarika ny diany tany an-tany foana ny Liahônà—Nosoratana ombieny ombieny teo amin’ny Liahônà ny hafatra avy tamin’ny Tompo—Maty Ismaela; nimonomonona ny ankohonany noho ny fahoriany. Tokony ho 600–592 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 17
Nodidina i Nefia hanamboatra sambo iray—Nanohitra azy ny rahalahiny—Namporisihany izy ireo tamin’ny famohazana ny tantaran’ny fitondran’ Andriamanitra an’i Isiraely—Nanenika an’i Nefia ny herin’ Andriamanitra—Norarana tsy hikasika azy ny rahalahiny fandrao dia halazo toy ny zozoro maina izy ireo. Tokony ho 592–591 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 18
Ny fahavitan’ny sambo—Filazana ny nahaterahan’i Jakoba sy i Jôsefa—Niondrana an-tsambo ny mpiray dia hankany amin’ny tany nampanantenaina—Nandray anjara tamin’ny filalaovan-dratsy sy ny fikomiana ny zanakalahin’i Ismaela mbamin’ny vadiny avy—Nifatotra i Nefia ary natosiky ny tafio-drivotra mahatsiravina hiverina ilalana ny sambo—Nafahana i Nefia, ary nitsahatra ny tafiotra noho ny fivavahany—Ny fahatongavan’ny olona tany amin’ny tany nampanantenaina. Tokony ho 591–589 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 19
Nanao takelaka tamin’ny akora i Nefia ary nirakitra an-tsoratra ny tantaran’ny olony—Eninjato taona taorian’ny fotoana nandaozan’i Lehia an’i Jerosalema vao ho tonga ny Andriamanitry ny Isiraely—Nilaza ny amin’ny fijaliany sy ny nanomboana Azy i Nefia—Hohamavoina ny Jiosy sy haely patrana hatramin’ny andro farany izay hiverenany amin’ny Tompo. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 20
Nanambara tamin’ny Isiraely ny zava-kinendriny ny Tompo—Efa nofinidy tao amin’ny memin’ny fahoriana i Isiraely ary handeha hiala an’i Babylona—Ampitahao amin’i Isaia 48. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 21
Ho fahazavana ho an’ny Jentilisa ny Mesia ary hanafaka ny mpifatotra—Hangonina amin-kery i Isiraely amin’ny andro farany—Ho ray mpitaiza azy ny mpanjaka—Ampitahao amin’i Isaia 49. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
1 Nefia 22
Haely patrana eran’ny lafiny rehetra amin’ny tany i Isiraely—Hitaiza sy hamelona an’i Isiraely amin’ny filazantsara ny Jentilisa amin’ny andro farany—Hangonina i Isiraely ka hovonjena, ary hirehitra toy ny mololo ny olon-dratsy—Horavana ny fanjakan’ny devoly ary hafatotra i Satana. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 1
Naminany momba ny tanim-pahafahana iray i Lehia—Haely patrana ny taranany ary hokapohina raha mitsipaka ny Iray Masin’ny Isiraely—Namporisika ny zanany lahy izy hitafy ny fiarovantenan’ny fahamarinana. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 2
Ny fahatongavan’ny fanavotana amin’ny alalan’ny Mesia Masina—Ny fahafahana misafidy (ny maha-tompon-tsafidy) no ilaina amin’ny fahavelomana sy ny fivoarana—Lavo i Adama mba hisian’ny olona—Ny fahafahan’ny olona misafidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 3
Nahita ny Nefita tamin’ny fahitana i Josefa tany Egypta—Naminany ny momba an’i Joseph Smith mpahita amin’ny andro farany izy; ny momba an’i Mosesy izay hanafaka an’i Isiraely; ary ny momba ny fivoahan’ny Bokin’i Môrmôna. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 4
Nanoro hevitra sy nitso-drano ny taranany i Lehia—Nodimandry izy ary nalevina—Nifaly tamin’ny hatsaram-pon’ Andriamanitra i Nefia—Nametraka mandrakizay ny fitokiany tamin’ Andriamanitra i Nefia. Tokony ho 588–570 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 5
Ny Nefita dia nisaraka tamin’ny Lamanita, nitandrina ny lalàn’i Mosesy ary nanorina tempoly iray—Noho ny tsy finoany dia nesorina teo anatrehan’ny Tompo sy nozonina ary tonga matroka fihodirana ny Lamanita ka nanjary antambo ho an’ny Nefita. Tokony ho 588–559 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 6
Namohafoha ny tantaran’ny Jiosy i Jakoba: Ny fahababoana tany Babylona sy ny fiverenana; ny asa fanompoana sy ny fanomboana ny Iray Masin’ny Isiraely; ny fanampiana noraisina avy tamin’ny Jentilisa; ary ny fampodiana ny Jiosy amin’ny laoniny amin’ny andro farany rehefa mino ny Mesia izy. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 7
Nanohy namaky tao amin’i Isaia i Jakoba: Niteny ho an’ny Mesia i Isaia—Hanana ny lelan’ny olo-mahay ny Mesia—Hanolotra ny lamosiny ho an’ny mpikapoka Izy—Tsy hangaihay Izy—Ampitahao amin’ny Isaia 50. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 8
Nanohy namaky tao amin’i Isaia i Jakoba: Hampionona an’i Ziona sy hanangona an’i Isiraely ny Tompo amin’ny andro farany—Ho tonga any Ziona amim-pifaliana lehibe ny voavotra—Ampitahao amin’ny Isaia 51 sy 52:1–2. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 9
Nanazava i Jakoba fa hangonina any amin’ny tany rehetra nampanantenaina ho azy ireo ny Jiosy—Ny Sorompanavotana no manarina ny olona avy amin’ny fahalavoana—Hivoaka avy any am-pasana ny vatan’ny maty ary avy any amin’ny helo sy ny paradisa kosa ny fanahiny—Hotsaraina izy ireo—Ny Sorompanavotana no mamonjy amin’ny fahafatesana, sy ny helo, sy ny devoly, ary ny fijaliana tsisy fiafarany—Ny marina no ho voavonjy ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra—Nambara ny famaizana noho ny fahotana—Ilay Masin’ny Isiraely no mpiandry ny vavahady. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 10
Nanazava i Jakoba fa hohomboan’ny Jiosy ny Andriamaniny—Haely patrana izy mandra-panombohan’izy ireo hino Azy—Ho tanim-pahafahana i Amerika izay tsy hisy mpanjaka hanapaka—Mihavàna amin’ Andriamanitra ianareo ka raiso ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavany. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 11
Nahita ny Mpanavotra azy i Jakoba—Ny lalàn’i Mosesy no tandindon’i Kristy ary nanaporofo fa ho avy Izy. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 12
Nahita ny tempolin’ny andro farany, ny fanangonana an’i Isiraely sy ny fitsarana ary ny fandriampahalemana tamin’ny arivotaona i Isaia—Haetry ny mpiavonavona sy ny olon-dratsy amin’ny Fiaviana Fanindroany—Ampitahao amin’i Isaia 2. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 13
Hofaizina i Joda sy i Jerosalema noho ny tsy fankatoavany—Nandahateny taminy sy nitsara ny vahoakany ny Tompo—Nozonina sady nampijaliana ny zanakavavin’i Ziona noho ny rehak’izao tontolo izao. Ampitahao amin’i Isaia 3. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 14
Havotana i Ziona sy ny zanakavaviny ary hodiovina amin’ny andron’ny arivotaona—Ampitahao amin’i Isaia 4. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 15
Ho aolo ny tanimbolin’ny Tompo (Isiraely) ary haely patrana ny olony—Antambo no hanjo ireo izay mivadika sy misaratsaraka—Hanangana faneva ny Tompo ary hanangona an’i Isiraely—Ampitahao amin’i Isaia 5. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 16
Nahita ny Tompo i Isaia—Navela ny fahotan’i Isaia—Nantsoina haminany izy—Naminany ny amin’ny fandavan’ny Jiosy ny fampianaran’i Kristy izy—Ny sisa tavela dia hiverina—Ampitahao amin’i Isaia 6. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 17
Namaky ady tamin’i Joda i Efraima sy i Syria—Hateraky ny virijiny i Kristy—Ampitahao amin’i Isaia 7. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 18
Ho toy ny vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka i Kristy—Tadiavo ny Tompo fa tsy ireo mpisikidy mitsiatsiaka—Itodiho ny lalàna sy ny fanambarana mba ho torolalana—Ampitahao amin’i Isaia 8. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 19
Niteny ho an’ny Mesia i Isaia—Hahita mazava lehibe ny olona ao amin’ny haizina—Zaza no nateraka ho antsika—Ho Andrian’ny Fiadanana Izy ary hanjaka eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida—Ampitahao amin’i Isaia 9. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 20
Ny fandravana an’i Asyria dia tandindon’ny famongorana ny olon-dratsy amin’ny Fiaviany Fanindroany—Olom-bitsy no ho tavela aorian’ny Fiavian’ny Tompo indray—Hiverina ny sisa tavela amin’i Jakoba amin’izany andro izany—Ampitahao amin’i Isaia 10. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 21
Hitsara araka ny rariny ny vatan’i Jese (i Kristy)—Hahenika ny tany ny fahalalana an’ Andriamanitra amin’ny Arivotaona—Hanangana faneva ny Tompo ka hanangona an’i Isiraely—Ampitahao amin’i Isaia 11. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 22
Hidera ny Tompo ny olona rehetra amin’ny arivotaona—Honina eo anivony Izy—Ampitahao amin’i Isaia 12. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 23
Ny fandravana an’i Babylona dia tandindon’ny famongorana amin’ny Fiaviany Fanindroany—Ho andron’ny fahatezerana sy ny valifaty izany—Hirodana mandrakizay i Babylona (izao tontolo izao)—Ampitahao amin’i Isaia 13. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 24
Isiraely dia hangonina ary hankafy ny fitsaharan’ny arivotaona—Noroahina hiala tany an-danitra i Losifera noho ny fikomiany—Handresy an’i Babylona (izao tontolo izao) i Isiraely—Ampitahao amin’i Isaia 14. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 25
Nirehareha ny amin’ny fanazavan-tsaina i Nefia—Hazava ny faminanian’i Isaia amin’ny andro farany—Ny Jiosy dia hiverina avy any Babylona, hanombo ny Mesia sy haely patrana ary hampahoriana—Hampodiana izy rehefa mino ny Mesia—Ho tonga voalohany Izy, eninjato taona taorian’ny nandaozan’i Lehia an’i Jerosalema—Nitandrina ny lalàn’i Mosesy ny Nefita sady nino an’i Kristy, dia ny Iray Masin’ny Isiraely. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 26
Hampianatra ny Nefita i Kristy—Nahita ny famongorana ny olony i Nefia—Hiteny avy amin’ny vovoka ireo—Hanorina fiangonana sandoka sy firaisana tsikombakomba miafina ny Jentilisa—Ny Tompo dia nandrara ny olona tsy hampiasa ny komiberaky ny mpisorona. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 27
Hanenika ny tany ny fahamaizinana sy ny apôstazia amin’ny andro farany—Hivoaka ny Bokin’i Môrmôna—Ny vavolombelona telo no hanambara ny boky—Hilaza ny olo-mahay fa tsy afaka mamaky ny boky voafehin’ny tombo-kase izy—Hanao asa iray mahatalanjona sy mahagaga ny Tompo—Ampitahao amin’i Isaia 29. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 28
Haorina ny fiangonana sandoka marobe amin’ny andro farany—Hampianatra fotopampianarana diso, tsy ilaina ary tsy misy heviny ireny—Ho sesehena ny apôstazia noho ny mpampianatra sandoka—Ho romotra ny devoly ao am-pon’ny olona—Hampianariny avokoa ny toetoetry ny fotopampianarana sandoka. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 29
Hitsipaka ny Bokin’i Môrmôna ny Jentilisa maro—Hilaza izy hoe, Tsy mila Baiboly intsony izahay—Niteny tamin’ny firenena maro ny Tompo—Hitsara izao tontolo izao Izy araka ireo boky izay hosoratana. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 30
Ho tafiditra ho isan’ny vahoakan’ny fanekempihavanana ny Jentilisa niova fo—Hino ny teny ny Lamanita sy ny Jiosy maro ka hanjary maha-te ho tia—Hampodiana amin’ny laoniny Isiraely ary hofongorana ny olon-dratsy. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 31
Nilaza ny antony nanaovana batisa an’i Kristy i Nefia—Tsy maintsy hanara-dia an’i Kristy ka hatao batisa sy handray ny Fanahy Masina ary haharitra hatramin’ny farany ny olona mba hovonjena—Ny fibebahana sy ny batisa no varavaran’ny lalana ety sy tery. Ny fahatongavan’ny fiainana mandrakizay amin’ireo izay nitandrina ny didy rehefa avy natao batisa. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 32
Miteny amin’ny herin’ny Fanahy Masina ny anjely—Tsy maintsy mivavaka ny olona hahazoany fahalalana ho an’ny tenany avy amin’ny Fanahy Masina. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
2 Nefia 33
Ny fahamarinan’ny tenin’i Nefia—Ny fanambarany ny amin’i Kristy—Ireo izay nino an’i Kristy dia hino ny tenin’i Nefia, izay hijoro ho vavolombelona eo anoloan’ny toeram-pitsarana. Tokony ho 559–545 taona talohan’i Kristy.
Nikatsaka ny handresy lahatra ny olona mba hino an’i Kristy sy hitandrina ny didiny i Jakoba sy i Jôsefa—Nodimandry i Nefia—Nahazo vahana teo anivon’ny Nefita ny faharatsiana. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Niampanga ny fitiavan-karena sy ny avonavona ary ny tsy fahadiovam-pitondrantena i Jakoba—Afaka mikatsaka harena ny olona mba hanampiana ny olona namany—Nanome didy ny Tompo fa tsy tokony hisy lehilahy eo anivon’ny Nefita ka hanana vady mihoatra ny iray—Finaritra amin’ny fahadiovam-pitondrantenan’ny vehivavy ny Tompo. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Nandray ny teny mahafinaritra izay an’ Andriamanitra ny madio am-po—Nihoatra ny an’ny Nefita ny fahamarinan’ny Lamanita—Nampitandrina tamin’ny fijangajangana, ny faharatsiam-pitondran-tena ary ny fahotana rehetra i Jakoba. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Nidera ny Ray tamin’ny anaran’i Kristy ny mpaminany rehetra—Ny fanateran’i Abrahama an’i Isaka dia tandidon’ Andriamanitra sy ny Zanany Lahitokana—Tokony hihavana amin’ Andriamanitra ny olona amin’ny alalan’ny sorompanavotana—Hotsipahin’ny Jiosy ny vato fehizoro. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Nitatitra ny tenin’i Zenosa mikasika ny fanoharana ny amin’ny hazo oliva voakolokolo sy ny hazo oliva dia i Jakoba—Ireo dia fifanahafana eo amin’i Isiraely sy ny Jentilisa—Voasoritra mialoha ny fielezana sy ny fanangonana an’i Isiraely—Voatsiahy amin’izany ny Nefita sy ny Lamanita ary ny mpianakavin’i Isiraely rehetra—Hatao grefy amin’i Isiraely ny Jentilisa—Hodorana ny tanimboly amin’ny farany. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Hampody ny Isiraely ny Tompo amin’ny andro farany—Hodorana amin’ny afo izao tontolo izao—Tsy maintsy manara-dia an’i Kristy ny olona mba hisorohana ny farihy afo sy solifara. Tokony ho 544–521 taona talohan’i Kristy.
I Serema dia nandà an’i Kristy, nifanditra tamin’i Jakoba, nitaky famantarana, ary nofaizin’ Andriamanitra—Efa nilaza ny amin’i Kristy sy ny Sorompanavotany ny mpaminany rehetra—Nandany ny androny toy ny mpirenireny ny Nefita, nateraka tao amin’ny fahasahiranana izy, ary nankahalain’ny Lamanita. Tokony ho 544–421 taona talohan’i Kristy.
Nahery nivavaka tokoa i Enôsa ary nahazo ny famelana ny fahotany izy—Tonga tao an-tsainy ny feon’ny Tompo, nampanantena famonjena ho an’ny Lamanita amin’ny andro ho avy—Nikatsaka ny hanarina ny Lamanita ny Nefita—Nifaly tamin’ny Mpanavotra azy i Enôsa. Tokony ho 420 taona talohan’i Kristy.
Nitandrina ny lalàn’i Mosesy ny Nefita sady niandrandra ny fiavian’i Kristy ka niroborobo teo amin’ny tany—Nifofotra ny mpaminany marobe mba hitana ny olona amin’ny lalan’ny fahamarinana. Tokony ho 399–361 taona talohan’i Kristy.
Nifandimby tsirairay nitana ny rakitsoratra i Ômnia, i Amarôna, i Kemisa, i Abinadôma ary i Amalekià—Hitan’i Môzià ny mponin’i Zarahemlà, izay nandao an’i Jerosalema tamin’ny andron’i Zedekia—Nataon’izy ireo mpanjakany i Môzià—Ny nahitan’ny tamingan’i Mioleka ao Zarahemlà an’i Kôriantomira ilay sisa tavela tamin’ny Jaredita—Nandimby an’i Môzià i Benjamina mpanjaka—Tokony hatolotry ny olona an’i Kristy ho toy ny fanatitra ny fanahiny. Tokony ho 323–130 taona talohan’i Kristy.
Namintina ny takelaka lehiben’i Nefia i Môrmôna—Nampiarahany tamin’ny takelaka hafa ny takelaka kely—Nampiorina fandriampahalemana teo amin’ny tany i Benjamina Mpanjaka. Tokony ho 385 taona taorian’i Kristy.
Tonga lohan’ny mpitsara i Pahôràna faharoa ary novonoin’i Kiskomena—Nipetraka teo amin’ny toeram-pitsarana i Pakomenia—I Kôriantomira no nitarika ny miaramila Lamanita naka an’i Zarahemlà, ary namono an’i Pakomenia—Nandresy ny Lamanita ary naka indray an’i Zarahemlà i Môrônihà, ary novonoina i Kôriantomira. Tokony ho 52–50 taona talohan’i Kristy.
Tonga lohan’ny mpitsara i Helamàna, zanakalahin’i Helamàna—Nitarika ny antokon’i Kiskomena i Gadiantôna—Namono an’i Kiskomena ny mpanompon’i Helamàna, ary nilefa nankany an-tany foana ny tarik’i Gadiantôna. Tokony ho 50–49 taona talohan’i Kristy.
Nifindra monina tany amin’ny tany andafiavaratra ny Nefita maro—Nanorina trano tamin’ny simenitra sy nitana rakitsoratra maro izy ireo—An’alina no niova fo sy natao batisa—Nitarika ny olona hankamin’ny famonjena ny tenin’ Andriamanitra—Nipetraka teo amin’ny toeram-pitsarana i Nefia, zanakalahin’i Helamàna. Tokony ho 49–39 taona talohan’i Kristy.
Nampitambatra ny heriny ny mpiendaka Nefita sy ny Lamanita ary naka ny tanin’i Zarahemlà—Tonga ny faharesen’ny Nefita noho ny faharatsiany—Nihemotra ny fiangonana, ary nanjary nalemy toy ny Lamanita ny vahoaka. Tokony ho 38–30 taona talohan’i Kristy.
Nanokana ny tenany ho amin’ny fitoriana i Nefia sy i Lehia—Nitaona azy ireo ny anarany hampitaha ny fiainany amin’ny an’ny razany—Nanavotra ireo izay nibebaka i Kristy—Nahatonga ny olona maro hiova fo i Nefia sy i Lehia ary notanana am-ponja sy nohodidinin’ny afo izy ireo—Nanaloka olona telonjato ny rahon’ny haizina—Nihovitrovitra ny tany, ary nandidy ny olona hibebaka ny feo iray—Nitafasiry tamin’ny anjely i Nefia sy i Lehia, ary nohodidin’ny afo ny besinimaro. Tokony ho 30 taona talohan’i Kristy.
Nitory tamin’ny Nefita mamohehatra ny Lamanita marina—Niroborobo ny vahoaka roa tonta nandritra ny fotoan’ny fandriampahalemana sy ny fahafenoana—I Losifera, fototry ny ota, dia namoky ny fon’ny olon-dratsy sy ny jirik’i Gadiantôna ho amin’ny famonoana sy ny faharatsiana—Nandray ny fitondrana ny governemanta Nefita ny jirika—Tokony ho 29–23 taona talohan’i Kristy.
Notsipahan’ny tany avaratra i Nefia ary niverina tao Zarahemlà—Nivavaka teo amin’ny tilikambon’ny sahany izy ary avy eo dia niantso ny olona na hibebaka na ho faty. Tokony ho 23–21 taona talohan’i Kristy.
Mikatsaka ny hambosy ny olona hanohitra an’i Nefia ny mpitsara lomorina—I Abrahama, i Mosesy, i Zenôsa, i Zenôka, i Ezia, i Isaia, i Jeremia, i Lehia sy i Nefia, dia nanambara ny amin’i Kristy daholo—Nambaran’i Nefia tamin’ny fitaoman’ny fanahy ny famonoana ny lohan’ny mpitsara. Tokony ho 23–21 taona talohan’i Kristy.
Nahita ny lohan’ny mpitsara maty teo amin’ny toeram-pitsarana ny iraka—Naiditra am-ponja izy ireo ary nafahana tato aoriana—Tamin’ny fitaoman’ny fanahy no namantaran’i Nefia an’i Seantoma ho mpamono—Neken’ny sasany ho mpaminany i Nefia. Tokony ho 23–21 taona talohan’i Kristy.
Nomen’ny Tompo fahefana hifehy i Nefia—Nomem-pahefana izy hamatotra sy hamaha ety an-tany tahaka ny any an-danitra—Nandidy ny olona izy na hibebaka na ho faty—Nitondra azy avy tamin’ny valalabemandry nankamin’ny valalabemandry ny Fanahy. Tokony ho 21–20 taona talohan’i Kristy.
Noresen’i Nefia lahatra ny Tompo mba hanolo ny adiny ho mosary—Maro ny olona maty—Nibebaka izy, ary nitalaho orana tamin’ny Tompo i Nefia—Nandray fanambarana maro i Nefia sy i Lehia—Niorim-paka teo amin’ny tany ny jirik’i Gadiantôna. Tokony ho 20–6 taona talohan’i Kristy.
Tsy mahatombin-tsiraka sy adala ary mailaka amin’ny fanaovan-dratsy ny olona—Nofaizin’ny Tompo ny olony. Nampitahaina ny herin’ Andriamanitra sy ny maha-tsinontsinona ny olona—Amin’ny andron’ny fitsarana, ny olona dia hahazo ny fiainana maharitra mandrakizay na ny fanamelohana maharitra mandrakizay. Tokony ho 6 taona talohan’i Kristy.
I Samoela ilay Lamanita dia naminany ny famongorana ny Nefita raha tsy mibebaka izy—Nozonina izy sy ny hareny—Nitsipaka sy nitora-bato ny mpaminany izy, notemerin’ny devoly manodidina, ary nikatsaka ny fahasambarana tamin’ny fanaovana heloka. Tokony ho 6 taona talohan’i Kristy.
Nolazain’i Samoela mialoha ny fisian’ny hazavana mandritra ny alina sy ny kintana vaovao amin’ny fahaterahan’i Kristy—Navotan’i Kristy tamin’ny fahafatesan’ny nofo sy ny fahafatesana ara-panahy ny olona—Ny famantarana ny amin’ny fahafatesany dia nahitana ny haizina hateloana, ny fitresahan’ny vatolampy ary ny fisavorovoroana lehibe teo amin’ny voary. Tokony ho 6 taona talohan’i Kristy.
Nofaizin’ny Tompo ny Nefita satria notiaviny izy—Ny Lamanita niova fo dia niorina sy nifototra tao amin’ny finoana—Ho feno famindram-po amin’ny Lamanita ny Tompo amin’ny andro farany. Tokony ho 6 taona talohan’i Kristy.
Ny Nefita izay nino an’i Samoela dia nataon’i Nefia batisa—I Samoela dia tsy hay novonoina tamin’ny zanatsipika sy ny vaton’ny Nefita tsy mety mivalo—Nanamafy ny fony ny sasany, nahita anjely ny hafa—Nilaza ny tsy mpino fa tsy fahendrena ny mino an’i Kristy sy ny fiaviany any Jerosalema. Tokony ho 6–1 taona talohan’i Kristy.
3 Nefia 1
I Nefia, zanakalahin’i Helamàna, dia nandeha niala ny tany, ary i Nefia zanany no nitana ny rakitsoratra—Na dia sesehena aza ny famantarana sy ny zava-mahagaga, dia nitetika ny handringana ny marina ny ratsy—Tonga ny alin’ny fahaterahan’i Kristy—Nomena ny famantarana ary nitranga ny kintana vaovao—Nitombo ny fandaingana sy ny famitahana, ary nandripaka maro ny jirik’i Gadiantôna. Tokony ho 1–4 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 2
Nitombo teo anivon’ny vahoaka ny faharatsiana sy ny fahavetavetana—Nitambatra ny Nefita sy ny Lamanita mba hiaro ny tenany tamin’ny jirik’i Gadiantôna—Nanjary fotsy ny Lamanita niova fo ary nantsoina hoe Nefita. Tokony ho 5–16 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 3
I Gidiania, ilay mpitondra ny Gadiantôna, dia nitaky ny hanoloran’i Lakôneo sy ny Nefita ny tenany sy ny taniny—Nanendry an’i Gidgidônia i Lakôneo ho lohan’ny kapitenin’ny miaramila—Nivory tao Zarahemlà sy Soafeno ny Nefita mba hiaro tena. Tokony ho 16–18 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 4
Nandresy ny jirik’i Gadiantôna ny miaramila Nefita—Novonoina i Gidiania ary nahantona i Zemnarià mpandimby azy—Nankalaza ny Tompo ny Nefita noho ny fandreseny. Tokony ho 19–22 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 5
Nibebaka sy nahafoy ny fahotany ny Nefita—Nanoratra ny tantaran’ny vahoakany i Môrmôna ary nanambara taminy ny teny maharitra mandrakizay—Hangonina avy amin’ny fielezany ela i Isiraely. Tokony ho 22–26 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 6
Niroborobo ny Nefita—Nipoitra ny avonavona, ny harena sy ny tsy fitovian-tsaranga—Nosamatsamahan’ny fisaraham-bazana ny fiangonana—Nitarika ny olona ho amin’ny fikomiana an-kitsirano i Satana—Niantso fibebahana ny mpaminany maro ary novonoina—Nioko ny haka ny governemanta ny mpamono azy ireo. Tokony ho 26–30 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 7
Nisy namono ny lohan’ny mpitsara, noravana ny governemanta, ary nizarazara ho foko ny vahoaka—Nanjary mpanjakan’ny tsikombakomba miafina i Jakoba, ilay antikristy—Nitory ny fibebahana sy ny finoana an’i Kristy i Nefia—Nanompo azy isan’andro ny anjely, ary nanangana ny rahalahiny tamin’ny maty izy—Nibebaka ny maro ary natao batisa. Tokony ho 30–33 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 8
Nanamarina ny fanomboana an’i Kristy ny tafiotra, ny horohoron-tany, ny afo, ny tadio ary ny loza voajanahary—Nofongorana ny vahoaka maro—Nandrakotra ny tany hateloana ny haizina—Nitaraina ny anjarany ireo izay nijanona. Tokony ho 33–34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 9
Tao amin’ny haizina no nanambaran’ny feon’i Kristy ny famongorana ny vahoaka sy ny tanàna maro noho ny faharatsiany—Nambarany koa ny maha-Andriamanitra Azy, nolazainy fa tanteraka ny lalàn’i Mosesy, ary nasainy nanatona Azy ny olona mba ho voavonjy. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 10
Nisy fahanginana teo amin’ny tany nandritra ny ora maro—Nampanantena ny hanangona ny vahoakany toy ny reniakoho manangona ny zanany ny feon’i Kristy—Efa notsimbinina ny ampahany marina indrindra tamin’ny vahoaka. Tokony ho 34–35 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 11
Nanambara ny amin’ny Zanany Malala ny Ray—Niseho i Kristy ary nanambara ny Sorompanavotany—Nitsapa ny mariky ny holatra teo amin’ny tanany sy ny tongony ary ny lanivoany ny vahoaka—Niantso Hosana izy ireo—Nanazava ny fombafomba sy ny fanao amin’ny batisa Izy—Avy amin’ny devoly ny fanahin’ny fifandirana—Ny fotopampianaran’i Kristy dia ny hinoan’ny olona sy ny hanaovana batisa azy ary ny handraisany ny Fanahy Masina. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 12
Niantso sy nanome fahefana ny mpianatra roa ambin’ny folo i Jesoa—Nanao lahateny nitovy tamin’ny Toriteny teo an-tendrombohitra tamin’ny Nefita Izy—Niresaka ny Fahasambarana Izy—Mihoatra ary manan-tombo amin’ny lalàn’i Mosesy ny fampianarany. Nodidina ny olona ho tanteraka toy ny maha-tanteraka Azy sy ny Rainy—Ampitahao amin’ny Matio 5. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 13
Nampianatra ny Nefita ny vavaky ny Tompo i Jesoa—Tokony hihary harena any an-danitra izy—Nodidina tsy hanan’eritreritra momba ny zavatra ara-nofo ny mpianatra roa ambin’ny folo eo amin’ny asa fanompoany. Ampitahao amin’ny Matio 6. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 14
Nandidy i Jesoa: Aza mitsara; manontania an’ Andriamanitra; mitandrema amin’ny mpaminany sandoka—Nampanantena famonjena ho an’ireo izay manao ny sitrapon’ny Ray Izy—Ampitahao amin’i Matio 7. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 15
Nolazain’i Jesoa fa tanteraka ao Aminy ny lalàn’i Mosesy—Ny Nefita no ondry hafa izay noresahiny tany Jerosalema—Noho ny heloka, dia tsy nahafantatra ny amin’ny ondrin’i Isiraely niely patrana ny vahoakan’ny Tompo tao Jerosalema. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 16
Hamangy ny hafa amin’ny ondry very amin’i Isiraely i Jesoa—Amin’ny andro farany dia handeha any amin’ny Jentilisa ary avy eo dia any amin’ny mpianakavin’i Isiraely ny filazantsara—Hahita mifanatri-maso ny vahoakan’ny Tompo rehefa mamerina indray an’i Ziona Izy. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 17
I Jesoa dia nisarika ny olona hisaintsaina ny teniny sy hivavaka hahatakarany izany—Nositraniny ny marary—Nivavaka ho an’ny vahoaka Izy ka nampiasa fiteny izay tsy hay soratana—Nanompo ny anjely ary nanodidina ny ankizy madininy ny afo. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 18
Nampiorina ny Fanasan’ny Tompo teo anivon’ny Nefita i Jesoa—Nodidina izy ireo hivavaka mandrakariva amin’ny Anarany—Voaozona ireo izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany tsy amim-pahamendrehana—Omena fahefana ny mpianatra hanolotra ny Fanahy Masina. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 19
Niahy ny vahoaka ny mpianatra roa ambin’ny folo ary nivavaka mba handray ny Fanahy Masina—Natao batisa ny mpianatra ary nandray ny Fanahy Masina sy ny fiahian’ny anjely—Nivavaka i Jesoa sady nampiasa teny izay tsy hay soratana—Nohamarininy ny finoana lehibe fatratra tokoa an’ireo Nefita. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 20
Namatsy mofo sy divay tamin’ny fahagagana i Jesoa ary nitsodrano sy nizara ny Fanasan’ny Tompo ho an’ny vahoaka—Ho tonga amin’ny fahalalana ny Tompo Andriamaniny ny sisa tavela amin’ny taranak’i Jakoba ary handova an’i Amerika—Jesoa no ilay mpaminany nitovy tamin’i Mosesy, ary zanaky ny mpaminany ny Nefita—Ny hafa amin’ny vahoakan’ny Tompo dia hangonina ao Jerosalema. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 21
Hangonina i Isiraely rehefa mivoaka ny Bokin’i Môrmôna—Haorina ho toy ny firenena afaka any Amerika ny Jentilisa—Hovonjena izy raha mino sy mankatò; raha tsy izany dia hojinjaina sy hofongorana—Hanorina an’i Jerosalema Vaovao i Isiraely, ary hiverina ireo foko very. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 22
Amin’ny andro farany dia haorina i Ziona sy ny tsatòkany, ary hangonina amin’ny famindram-po sy ny fahalemem-panahy i Isiraely—Handresy izy ireo. Ampitahao amin’isaia 54. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 23
Nankatò ny tenin’i Isaia i Jesoa—Nodidiany ny olona hanadihady ny mpaminany—Nampiana tamin’ny rakitsoratr’izy ireo ny tenin’i Samoela ilay Lamanita momba ny Fitsanganana amin’ny maty. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 24
Hanomana ny lalana ho amin’ny Fiaviana Fanindroany ny iraky ny Tompo—Hipetraka eo amin’ny fitsarana i Kristy–Nodidina Isiraely handoa ny fahafolonkarena sy ny fanatitra—Notanana ny bokin’ny fahatsiarovana—Ampitahao amin’i Malakia 3. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 25
Hodorana toy ny vodivary ny mpiavonavona sy ny olon-dratsy amin’ny Fiaviany Fanindroany—Hiverina i Elija mialohan’izany andro lehibe sy mahatahotra izany—Ampitahao amin’i Malakia 3:19–24. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 26
Namelabelatra ny zavatra rehetra hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarana i Jesoa—Nilaza zavatra mahatalanjona izay tsy hay soratana ny zaza sy ny ankizy—Niombonan’ireo tao amin’ny fiangonan’i Kristy avokoa ny zavatra izay nananany teo anivony. Tokony ho 34 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 27
Nodidin’i Jesoa izy hiantso ny Fiangonana amin’ny Anarany—Ny Asa nanirahana Azy sy ny Sorompanavotany no iorenan’ny Filazantsarany—Nodidina ny olona hibebaka sy hatao batisa mba hahazoana manamasina azy amin’ny Fanahy Masina—Tokony ho toa an’i Jesoa izy. Tokony ho 34–35 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 28
Ny sivy tamin’ireo mpianatra roa ambin’ny folo dia naniry ary nampanantenaina lova ao amin’ny fanjakan’i Kristy rehefa maty—Ny Nefita telo kosa dia naniry ary nomena ny fahefana amin’ny fahafatesana mba hitoetra eto an-tany ambara-pahatongan’i Jesoa indray—Tafafindra izy ireo ary mahita zavatra izay tsy azo ambara, Ary ankehitriny izy ireo dia manao asa fanompoana eo anivon’ny olona. Tokony ho 34–35 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 29
Ny fivoahan’ny Bokin’i Môrmôna dia famantarana iray fa efa manomboka manangona an’i Isiraely sy manatanteraka ny fanekempihavanany ny Tompo—Ho voaozona ireo izay mitsipaka ny fanambarany sy ny fanomezam-pahasoavany amin’ny andro farany. Tokony ho 34–35 taona taorian’i Kristy.
3 Nefia 30
Nodidina ny Jentilisan’ny andro farany hibebaka, hanatona an’i Kristy ary horaisina ho isan’ny mpianakavin’i Isiraely. Tokony ho 34–35 taona taorian’i Kristy.
Niova fo ho an’ny Tompo avokoa ny Nefita sy ny Lamanita—Niarahany nanana ny zava-drehetra, ary nanao fahagagana sy niroborobo teo amin’ny tany izy ireo—Taonjato roa taty aoriana dia nitranga ny fizarazarana, ny ratsy, ny fiangonana sandoka, ary ny fanenjehana—Telonjato taona aty aoriana dia nanjary ratsy na ny Nefita na ny Lamanita—Nanafina ny rakitsoratra masina i Amarôna. Tokony ho 35–321 taona taorian’i Kristy.
Namepetra an’i Môrmôna momba ny rakitsoratra masina i Amarôna—Niandoha ny ady teo amin’ny Nefita sy ny Lamanita—Nesorina hiala ny Nefita Telo lahy—Nanjaka ny faharatsiana, ny tsy finoana, ny famosaviana ary ny famorehana. Tokony ho 321–326 taona taorian’i Kristy.
Nitarika ny miaramila Nefita i Môrmôna—Nandrakotra ny tany ny ra sy ny fandripahana—Nitoloko sy nitomany tamin’ny alahelon’ny voaozona ny Nefita—Lasa ny andron’ny fankasitrahana azy—Nahazo ny takelak’i Nefia i Môrmôna—Nitohy ny ady. Tokony ho 327–350 taona taorian’i Kristy.
Niantso ny Nefita hibebaka i Môrmôna—Nahazo fandresena lehibe ireo ary nankalaza ny heriny ihany—Nandà ny hitarika azy i Môrmôna, ary tsy niaraka tamin’ny finoana ny fivavany ho azy—Manasa ny fokon’i Isiraely roa ambin’ny folo ny Bokin’i Môrmôna mba hino ny filazantsara. Tokony ho 360–362 taona taorian’i Kristy.
Nitohy ny ady sy ny fandripahana—Ny ratsy nanafay ny ratsy—Nanjaka ny faharatsiana lehibe kokoa noho ny teo aloha teo amin’i Isiraely manontolo—Natao sorona tamin’ny sampy ny vehivavy sy ny ankizy—Nanomboka nifaoka ny Nefita teo anoloany ny Lamanita. Tokony ho 363–375 taona taorian’i Kristy.
Nitarika indray ny miaramila Nefita tamin’ny ady feno ra sy fandripahana i Môrmôna—Hivoaka ny bokin’i Môrmôna mba handresy lahatra an’i Isiraely rehetra fa i Jesoa no Kristy—Noho ny tsy finoany dia haely patrana ny Lamanita, ary hitsahatra ny hitaona azy ny Fanahy—Handray ny filazantsara avy amin’ny Jentilisa izy amin’ny andro farany. Tokony ho 375–384 taona taorian’i Kristy.
Nivory teo an-tanin’i Komôrà ho amin’ny ady farany ny Nefita—Nanafina ny rakitsoratra masina tao amin’ny vohitr’i Komôrà i Môrmôna—Nandresy ny Lamanita, ary fongotra ny firenena Nefita—An’hetsiny no voavono tamin’ny sabatra. Tokony ho 385 taona taorian’i Kristy.
Nanainga ny Lamanitan’ny andro farany i Môrmôna mba hino an’i Kristy, hanaiky ny filazantsarany, ary ho voavonjy—Izay rehetra mino ny Baiboly dia hino koa ny Bokin’i Môrmôna. Tokony ho 385 taona taorian’i Kristy.
Nihaza sy namongotra ny Nefita ny Lamanita—Hivoaka amin’ny alalan’ny herin’ Andriamanitra ny Bokin’i Môrmôna—Voatonona ny loza ho an’ireo izay mifofo fahatezerana sy adiady hanoherana ny asan’ny Tompo—Hivoaka amin’ny andron’ny faharatsiana, ny fahalovana ary ny fivadihana ny rakitsoratra Nefita. Tokony ho 400–421 taona taorian’i Kristy.
Nanainga ireo izay tsy nino an’i Kristy hibebaka i Môrônia—Izy dia nitory ny Andriamanitry ny fahagagana, izay manome fanambarana ary mampidina fanomezana sy famantarana amin’ny mahatoky—Nitsahatra ny fahagagana noho ny tsy finoana—Nanaraka ireo izay nino ny famantarana—Namporisihina ny olona ho hendry sy hitandrina ny didy. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Namintina ny soratr’i Etera i Môrônia—Aroso etoana ny tetiaran’i Etera—Tsy voakorokoro ny fitenin’ny Jaredita tao amin’ny Tilikambon’i Babela—Nampanantena ny hitarika azy any amin’ny tany nofinidy ny Tompo ary ny hahatonga azy ho firenena lehibe.
Niomana ho amin’ny diany mankamin’ny tany nampanantenaina ny Jaredita—Tany finidy izany izay tsy maintsy anompoan’ny olona an’i Kristy na ho fongana—Niresaka tamin’ny rahalahin’i Jareda mandritra ny ora telo ny Tompo—Nanamboatra sambo ny Jaredita—Nangataka ny rahalahin’i Jareda ny Tompo hamosa-kevitra ny amin’ny fomba hanazavana ny sambo.
Nahita ny rantsantanan’ny Tompo nikasika ny vato enina ambin’ny folo ny rahalahin’i Jareda—Naneho ny vatany fanahy tamin’ny rahalahin’i Jareda i Kristy—Ireo izay manana fahalalana tomombana dia tsy ho azo tanana any ivelan’ny voaly—Nampombana ny fandikan-teny hitondrana ny rakitsoratry ny Jaredita ho eo amin’ny mazava.
Nodidina i Môrônia hifehy ny soratry ny rahalahin’i Jareda—Tsy hambara ireny raha tsy manana finoana tahaka ny rahalahin’i Jareda ny olona—Nandidy ny olona i Kristy hino ny teniny sy ny an’ireo mpianany—Nodidina ny olona hibebaka, hino ny filazantsara, ary ho voavonjy.
Vavolombelona telo sy ny asa mihitsy no hijoro ho toy ny fanambarana ny amin’ny fahamarinan’ny Bokin’i Môrmôna.
Natosiky ny rivotra nankamin’ny tany nampanantenaina ny sambofiara Jaredita—Nidera ny Tompo ny vahoaka noho ny hatsarany—Notendrena ho mpanjaka teo aminy i Ôrihà—Maty i Jareda sy ny rahalahiny.
Nanjaka tamim-pahamarinana i Ôrihà—Tao anatin’ny fisandohana sy ny adilahy no nitsangana ny fanjakam-pifandrafian’i Sole sy i Kôhôra—Ny mpaminany dia nanameloka ny faharatsiana sy ny fanompoan-tsampin’ny vahoaka izay nibebaka taorian’izany.
Nisy ny adilahy sy ny fifandirana momba ny fanjakana—Nanangana tsikombakomba miafina nofehezim-belirano i Akisa hamonoana ny mpanjaka—Avy tamin’ny devoly ny tsikombakomba miafina ary niafara tamin’ny faharavan’ny firenena—Ny Jentilisa ankehitriny dia nampitandremana tamin’ny tsikombakomba miafina izay nikatsaka ny handrodana ny fahafahan’ny tany, ny firenena ary ny fanjakana rehetra.
Avy tamin’ny anankiray dia nifindra tamin’ny anankiray hafa ny fanjakana tamin’ny alalan’ny firazanana, ny fiokoana ary ny vonoan’olona—Nahita ny Zanaky ny Fahamarinana i Emera—Niantso fibebahana ny mpaminany maro—Nampahory ny vahoaka ny mosary sy ny menarana misy poizina.
Nifandimby ny mpanjaka—Ny sasany tamin’ny mpanjaka dia marina; ny hafa dia ratsy—Rehefa manjaka ny fahamarinana, dia tahina sy tsimbinin’ny Tompo ny vahoaka.
Nanjaka teo amin’ny fiainan’ny Jaredita ny ady, ny fifandirana ary ny faharatsiana—Nilaza mialoha ny famongorana tanteraka ny Jaredita ireo mpaminany raha tsy mibebaka izy—Nitsipaka ny tenin’ny mpaminany ny vahoaka.
Nitaona ny vahoaka hino an’ Andriamanitra i Etera mpaminany—Nitantara ny mahagaga sy ny mahatalanjona vitan’ny finoana i Môrônia—Finoana no nahafahan’ny rahalahin’i Jareda nahita an’i Kristy—Nanome fahalemena ny olona ny Tompo mba hahatonga azy hanetry tena—Namindra ny tendrombohitr’i Zerina tamin’ny finoana ny rahalahin’i Jareda—Ny finoana, ny fanantenana ary ny fiantrana dia ilaina amin’ny famonjena—Nahita an’i Jesoa nifanatrika taminy i Môrônia.
Niresaka ny amin’i Jerosalema Vaovao izay haorin’ny taranak’i Josefa any Amerika i Etera—Naminany izy, voaroaka, nanoratra ny tantaran’ny Jaredita ary nilaza mialoha ny famongorana ny Jaredita—Nirongatra ny ady eran’ny tany manontolo.
Nitondra ozona teo amin’ny tany ny heloky ny vahoaka—Rafitra niady tamin’i Gileada, tamin’i Liba avy eo, ary rehefa izany dia tamin’i Siza i Kôriantomira—Nandrakotra ny tany ny ra sy ny fandringanana.
An-tapitrisany ny Jaredita voavono an’ady—Namory ny olony rehetra ho amin’ny ady mahafaty i Siza sy i Kôriantomira—Nitsahatra ny fitaoman’ny Fanahin’ny Tompo azy ireo—Fongotra tanteraka ny firenena Jaredita. I Kôriantomira ihany no tafajanona.
Nanoratra ho tombontsoan’ny Lamanita i Môrônia—Ny Nefita izay tsy te handà an’i Kristy dia novonoina ho faty. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Nanome fahefana ny mpianatra Nefita roa ambin’ny folo i Jesoa hanolotra ny fanomezana ny Fanahy Masina. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Nanokana mpisorona sy mpampianatra ny loholona tamin’ny alalan’ny fametrahan-tanana. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Fanazavana ny fomba nitantanan’ny loholona sy ny mpisorona ny mofon’ny fanasan’ny Tompo. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Fanomezana ny fomba fitantanana ny divain’ny fanasan’ny Tompo. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Natao batisa sy noraisina ho namana ny olona nibebaka—Ny mpikamban’ny fiangonana izay nibebaka dia navela heloka—Notarihina tamin’ny herin’ny Fanahy Masina ny fivoriana. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Nomena ny fanasana hidirana ao amin’ny fitsaharan’ny Tompo—Mivavaha amin’ny finiavana marina—Nahafahan’ny olona nanavaka ny tsara tamin’ny ratsy ny Fanahin’i Kristy—Mandresy lahatra ny olona handà an’i Kristy sy hanao ny ratsy i Satana—Naneho ny fiavian’i Kristy ireo mpaminany—Amin’ny finoana no anaovana fahagagana sy anompoan’ny anjely—Tokony hanantena ny fiainana mandrakizay sy hifikitra amin’ny fiantrana ny olona. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Fahavetavetana ratsy ny batisan’ny ankizy madinika—Velona ao amin’i Kristy ny ankizy madinika noho ny Sorompanavotana—Mitondra any amin’ny famonjena ny finoana, ny fibebahana, ny fahalemem-paika sy ny fietren’ny fo, ny fandraisana ny Fanahy Masina, ary ny faharetana hatramin’ny farany. Tokony ho 401–421 taona taorian’i Kristy.
Namohehatra sy niharatsy na ny Nefita na ny Lamanita—Nifampahory sy nifamono izy ireo—Nivavaka i Môrmôna mba hitoetra amin’i Môrônia mandrakizay ny fahasoavana sy ny hatsaram-po. Tokony ho 401 taona taorian’i Kristy.
Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Bokin’i Môrmôna dia tonga amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina—Tsinjaraina ho an’ny mahatoky ny fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy—Miaraka mandrakariva amin’ny finoana ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy—Miteny avy ao amin’ny vovoka ny tenin’i Môrônia—Manatòna an’i Kristy, aoka ho tanteraka ao Aminy ary hamasino ny fanahinareo. Tokony ho 421 taona taorian’i Kristy.